မော်တော်ယာဉ်၏ ဂီယာ စနစ် ယိုယွင်းမှု လက္ခဏာများ – WunYan
မော်တော်ယာဉ်၏ ဂီယာ စနစ် ယိုယွင်းမှု လက္ခဏာများ
Posted on October 29, 2018 by whuk-46651
မော်တော်ယာဉ်ရဲ့ ဂီယာစနစ်ဟာ ကားတစ်စီးလုံးရဲ့ အရေးအပါဆုံးနဲ့ အရှုပ်ထွေးဆုံး အစိတ်အပိုင်းတွေထဲက တစ်ခုပါ။ ရှုပ်ထွေးတဲ့ ဟိုက်ဒရောလစ် စနစ်တွေ ရာချီ ပါဝင်ပြီး ကွန်ပြူတာနဲ့ ထိန်းထားတဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေကလဲ ဂီယာပြောင်းဖို့ အတူတကွ ပူးတွဲ လုပ်ဆောင်နေရပါတယ်။
ခုခေတ် ရှေ့ယက် ယာဉ်တွေ၊ အော်တိုဂီယာတွေ၊ ကွန်ပြူတာစနစ်တွေ ပါဝင်လာတဲ့ ဂီယာစနစ်ဟာ ရှုပ်ထွေးပြီး ပြင်ဆင်ရ ခက်ပါတယ်။ ပုံမှန် Service ပေးဖို့၊ ဆီလဲပေးဖို့လဲ လိုအပ်ပါတယ်။ ဂီယာပျက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ဖို့ ဂီယာစနစ် ပျက်စီးစ ပြုနေကြောင်း ပြတဲ့ လက္ခဏာတွေကို ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။
ဂီယာအုံက အရည်ယိုတာဟာ ကားကို ဂရုစိုက်ဖို့ လိုပြီဖြစ်ကြောင်း ပြတဲ့ လက္ခဏာ တစ်ခုပါ။ သင့်ကားဂိုထောင်ကြမ်းပြင်က အရည်လေး နည်းနည်းဟာ ပြသနာကြီး အဖြစ် ပြောင်းလဲ သွားနိုင်ပါတယ်။ ဂီယာဆီဟာ သင့်ကား ဂီယာ ပြောင်းနိုင်ဖို့ အရေးပါပြီး အနီရောင် တောက်တောက် ချိုတဲ့ အနံ့ရှိတဲ့ အရည်တစ်မျိုးပါ။ ကား ဂီယာဆီ အလိုလို လျော့နေရင် ယိုနေလို့ပါပဲ။ ဂီယာဆီ ယိုနိုင်တဲ့ အကြောင်းတွေကတော့
– မကြာသေးခင်ကမှ ကားပြင်ထားတာ
– Gasket တွေ Seal တွေ စားနေတာ
– Bell Housing တွေ ပြသနာ ဖြစ်နေတာ
– ဂီယာတံ ချောင်နေတာ
– ဂီယာ စက်သွား ချော်နေတာ
– အင်ဂျင်၊ ဂီယာ၊ Axle အထိုင်တွေ ချောင်နေတာ တို့ပါ။
၂. Warning မီး လင်းလာခြင်း
ခုခေတ် ကားတွေမှာ ကားမှာ ပြသနာ ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကို ပြောပြ နိုင်တဲ့ အစွမ်း ရှိပါတယ်။ ဂီယာအုံက Sensor တွေဟာ သင်မသိနိုင်တဲ့ တုန်ခါလာတာတွေ၊ ပြသနာ စလာတာ တွေကို သိရှိပြီး ပြောပြနိုင်ပါတယ်။
အဖြစ်အများဆုံးကတော့ Transmission Temperature Warning မီး လင်းလာတာ ဖြစ်ပြီး ဂီယာဆီက ပုံမှန်ထက် ပိုပူနေပြီး ဂီယာအုံ တစ်ခုလုံး အပူလွန်လာရင် လင်းတတ်ပါတယ်။ အဲဒီမီး လင်းတာနဲ့ ဂီယာဆီ လယ်ဗယ်နဲ့ Coolant လယ်ဗယ်ကို ချက်ခြင်း စစ်ဆေးပါ။
ဂီယာဆီဟာ ချိုတဲ့ အနံ့ ရှိပါတယ်။ မီးလောင်ထားတဲ့ အနံ့မျိုး ရနေရင်တော့ ဂီယာဆီ အမြန်ဆုံး လဲသင့်ပါပြီ။ ဂီယာဆီဟာ ဂီယာစနစ် တစ်ခုလုံးကို ချောမွေ့အောင် လုပ်ပေးတဲ့အပြင် အပူမလွန်အောင်လဲ ကာကွယ် ပေးပါတယ်။ ဂီယာဆီ ကိုယ်တိုင်က အပူလွန် နေရင်တော့ ဂီယာအုံပါ လိုက်ပါ ပူနေပြီး ကြာရင် ဂီယာအုံချရတဲ့ အဆင့် ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
၄. Dipstick ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း
ဂီယာဆီကို Dipstick ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်းက အလွယ်ဆုံး နည်းလမ်းပါ။ သင့်ကား ဂီယာဆီ Dipstick ရှိတဲ့ နေရာကို Manual ထဲက ရှာကြည့်ပါ။ ကားအင်ဂျင်ကို Neutral ဒါမှ မဟုတ် Pack မှာထားပြီး အင်ဂျင် နွေးထဲထိ စောင့်ပါ။ ပြီးရင် အင်ဂျင်မရပ်ပဲ Dipstick ထုတ်လိုက်ပါ။
အင်ဂျင်ဆီ အရောင် သိဖို့ လက်မလက်ညှိုးနဲ့ ပွတ်လိုက်ပါ။ အဲဒိအရည်ဟာ ပန်းရောင် ရှိပြီး ကြည်လင်နေရပါမယ်။ အညိုရောင်ဖြစ်ပြီး လောင်ထားတဲ့ အနံ့ရရင်တော့ လဲသင့်ပါပြီ။ အရည် ပြည့်မပြည့်ကိုလဲ စစ်ကြည့်ပါဦး။
ဒီနေရာမှာတော့ အော်တိုနဲ့ Manual ဂီယာစနစ်အသံဆိုးတွေ မတူကြပါဘူး။ Manual စနစ်မှာဆိုရင် ဂီယာ ချိန်းတိုင်းမှာ အရမ်း ဖိကြိတ်ခံထား ရသလို အသံထွက်တာ မကောင်းတဲ့ လက္ခဏာပါ။ ကလပ် နင်းလိုက်ရင် အဲလို အသံထွက်ရင်လဲ မကောင်းပါဘူး။ ကလပ် ပြန်ချိန်ရမှာပါ။ ဂီယာစက်သွားတွေ စားသွားတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အော်တိုဂီယာ ဆိုရင်တော့ ဂီယာ ချိန်းတိုင်းမှာ မသိမသာ ပြောင်းသွားတာ မဟုတ်ပဲ သိသိသာသာ ခံစားသိရှိ နေရရင်တော့ တစ်ခုခု မှားနေပါပြီ။ တုန်နေတဲ့ အသံပါကြားရရင်တော့ ပိုသေချာပါတယ်။ တတ်ကျွမ်းသူနဲ့ သွားပြကြည့်ပါ။
၆. ဂီယာ ချက်ခြင်း မပြောင်းတာ
ဂီယာတွေဟာ လိုအပ်တဲ့ အဆင့်ကို ချက်ခြင်းရောက်ဖို့ ဒီဇိုင်း ထုတ်ထား တာပါ။ အဲဒါကို ချက်ခြင်း မပြောင်း ရင်တော့ တစ်ခုခု မှားနေပါပြီ။ Manual ဂီယာတွေမှာဆို ဂီယာ ပြောင်းလိုက်ရင် ကားအင်ဂျင်ပါ ပိုလည်လာပေမယ့် ကားသွားနှုန်း ပိုတက်မလာရင်တော့ ကလပ် စားနေတာ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဂီယာပြသနာ ဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Auto ဂီယာမှာတော့ Park နဲ့ Drive ပြောင်းတဲ့အခါမှာ ချက်ခြင်းမရောက်တာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒါဟာ ကားပြသနာ တင်မဟုတ်ပဲ သင့် လုံခြုံရေး အတွက်လဲ ပြသနာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် အမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
မျောတျောယာဉျ၏ ဂီယာ စနဈ ယိုယှငျးမှု လက်ခဏာမြား
မျောတျောယာဉျရဲ့ ဂီယာစနဈဟာ ကားတဈစီးလုံးရဲ့ အရေးအပါဆုံးနဲ့ အရှုပျထှေးဆုံး အစိတျအပိုငျးတှထေဲက တဈခုပါ။ ရှုပျထှေးတဲ့ ဟိုကျဒရောလဈ စနဈတှေ ရာခြီ ပါဝငျပွီး ကှနျပွူတာနဲ့ ထိနျးထားတဲ့ လြှပျစဈပစ်စညျးတှကေလဲ ဂီယာပွောငျးဖို့ အတူတကှ ပူးတှဲ လုပျဆောငျနရေပါတယျ။
ခုခတျေ ရှယေ့ကျ ယာဉျတှေ၊ အျောတိုဂီယာတှေ၊ ကှနျပွူတာစနဈတှေ ပါဝငျလာတဲ့ ဂီယာစနဈဟာ ရှုပျထှေးပွီး ပွငျဆငျရ ခကျပါတယျ။ ပုံမှနျ Service ပေးဖို့၊ ဆီလဲပေးဖို့လဲ လိုအပျပါတယျ။ ဂီယာပကျြခွငျးမှ ကာကှယျဖို့ ဂီယာစနဈ ပကျြစီးစ ပွုနကွေောငျး ပွတဲ့ လက်ခဏာတှကေို ဖျောပွ လိုကျပါတယျ။
ဂီယာအုံက အရညျယိုတာဟာ ကားကို ဂရုစိုကျဖို့ လိုပွီဖွဈကွောငျး ပွတဲ့ လက်ခဏာ တဈခုပါ။ သငျ့ကားဂိုထောငျကွမျးပွငျက အရညျလေး နညျးနညျးဟာ ပွသနာကွီး အဖွဈ ပွောငျးလဲ သှားနိုငျပါတယျ။ ဂီယာဆီဟာ သငျ့ကား ဂီယာ ပွောငျးနိုငျဖို့ အရေးပါပွီး အနီရောငျ တောကျတောကျ ခြိုတဲ့ အနံ့ရှိတဲ့ အရညျတဈမြိုးပါ။ ကား ဂီယာဆီ အလိုလို လြော့နရေငျ ယိုနလေို့ပါပဲ။ ဂီယာဆီ ယိုနိုငျတဲ့ အကွောငျးတှကေတော့
– မကွာသေးခငျကမှ ကားပွငျထားတာ
– Gasket တှေ Seal တှေ စားနတော
– Bell Housing တှေ ပွသနာ ဖွဈနတော
– ဂီယာတံ ခြောငျနတော
– ဂီယာ စကျသှား ခြျောနတော
– အငျဂငျြ၊ ဂီယာ၊ Axle အထိုငျတှေ ခြောငျနတော တို့ပါ။
၂. Warning မီး လငျးလာခွငျး
ခုခတျေ ကားတှမှော ကားမှာ ပွသနာ ဖွဈနတေဲ့နရောတှကေို ပွောပွ နိုငျတဲ့ အစှမျး ရှိပါတယျ။ ဂီယာအုံက Sensor တှဟော သငျမသိနိုငျတဲ့ တုနျခါလာတာတှေ၊ ပွသနာ စလာတာ တှကေို သိရှိပွီး ပွောပွနိုငျပါတယျ။
အဖွဈအမြားဆုံးကတော့ Transmission Temperature Warning မီး လငျးလာတာ ဖွဈပွီး ဂီယာဆီက ပုံမှနျထကျ ပိုပူနပွေီး ဂီယာအုံ တဈခုလုံး အပူလှနျလာရငျ လငျးတတျပါတယျ။ အဲဒီမီး လငျးတာနဲ့ ဂီယာဆီ လယျဗယျနဲ့ Coolant လယျဗယျကို ခကျြခွငျး စဈဆေးပါ။
ဂီယာဆီဟာ ခြိုတဲ့ အနံ့ ရှိပါတယျ။ မီးလောငျထားတဲ့ အနံ့မြိုး ရနရေငျတော့ ဂီယာဆီ အမွနျဆုံး လဲသငျ့ပါပွီ။ ဂီယာဆီဟာ ဂီယာစနဈ တဈခုလုံးကို ခြောမှအေ့ောငျ လုပျပေးတဲ့အပွငျ အပူမလှနျအောငျလဲ ကာကှယျ ပေးပါတယျ။ ဂီယာဆီ ကိုယျတိုငျက အပူလှနျ နရေငျတော့ ဂီယာအုံပါ လိုကျပါ ပူနပွေီး ကွာရငျ ဂီယာအုံခရြတဲ့ အဆငျ့ ရောကျသှားနိုငျပါတယျ။
၄. Dipstick ဖွငျ့ စဈဆေးခွငျး
ဂီယာဆီကို Dipstick ဖွငျ့ စဈဆေးခွငျးက အလှယျဆုံး နညျးလမျးပါ။ သငျ့ကား ဂီယာဆီ Dipstick ရှိတဲ့ နရောကို Manual ထဲက ရှာကွညျ့ပါ။ ကားအငျဂငျြကို Neutral ဒါမှ မဟုတျ Pack မှာထားပွီး အငျဂငျြ နှေးထဲထိ စောငျ့ပါ။ ပွီးရငျ အငျဂငျြမရပျပဲ Dipstick ထုတျလိုကျပါ။
အငျဂငျြဆီ အရောငျ သိဖို့ လကျမလကျညှိုးနဲ့ ပှတျလိုကျပါ။ အဲဒိအရညျဟာ ပနျးရောငျ ရှိပွီး ကွညျလငျနရေပါမယျ။ အညိုရောငျဖွဈပွီး လောငျထားတဲ့ အနံ့ရရငျတော့ လဲသငျ့ပါပွီ။ အရညျ ပွညျ့မပွညျ့ကိုလဲ စဈကွညျ့ပါဦး။
ဒီနရောမှာတော့ အျောတိုနဲ့ Manual ဂီယာစနဈအသံဆိုးတှေ မတူကွပါဘူး။ Manual စနဈမှာဆိုရငျ ဂီယာ ခြိနျးတိုငျးမှာ အရမျး ဖိကွိတျခံထား ရသလို အသံထှကျတာ မကောငျးတဲ့ လက်ခဏာပါ။ ကလပျ နငျးလိုကျရငျ အဲလို အသံထှကျရငျလဲ မကောငျးပါဘူး။ ကလပျ ပွနျခြိနျရမှာပါ။ ဂီယာစကျသှားတှေ စားသှားတာလဲ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
အျောတိုဂီယာ ဆိုရငျတော့ ဂီယာ ခြိနျးတိုငျးမှာ မသိမသာ ပွောငျးသှားတာ မဟုတျပဲ သိသိသာသာ ခံစားသိရှိ နရေရငျတော့ တဈခုခု မှားနပေါပွီ။ တုနျနတေဲ့ အသံပါကွားရရငျတော့ ပိုသခြောပါတယျ။ တတျကြှမျးသူနဲ့ သှားပွကွညျ့ပါ။
၆. ဂီယာ ခကျြခွငျး မပွောငျးတာ
ဂီယာတှဟော လိုအပျတဲ့ အဆငျ့ကို ခကျြခွငျးရောကျဖို့ ဒီဇိုငျး ထုတျထား တာပါ။ အဲဒါကို ခကျြခွငျး မပွောငျး ရငျတော့ တဈခုခု မှားနပေါပွီ။ Manual ဂီယာတှမှောဆို ဂီယာ ပွောငျးလိုကျရငျ ကားအငျဂငျြပါ ပိုလညျလာပမေယျ့ ကားသှားနှုနျး ပိုတကျမလာရငျတော့ ကလပျ စားနတော ဖွဈဖွဈ၊ ဂီယာပွသနာ ဖွဈဖွဈ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
Auto ဂီယာမှာတော့ Park နဲ့ Drive ပွောငျးတဲ့အခါမှာ ခကျြခွငျးမရောကျတာ ဖွဈတတျပါတယျ။ အဲဒါဟာ ကားပွသနာ တငျမဟုတျပဲ သငျ့ လုံခွုံရေး အတှကျလဲ ပွသနာ ဖွဈပါတယျ။ဒါကွောငျ့ အမွနျဆုံးပွငျဆငျဖို့ လိုအပျပါတယျ။